Ampio hitarika ny fikomiana amin'ny varotra | Martech Zone
Tamin'ny fotoana voalohany nihaonako Mark Schaefer, Nankasitraka avy hatrany ny zavatra niainany sy ny fahitany lalina aho. Miara-miasa amin'ireo orinasa mitarika amin'ny fanatsarana ny ezaka marketing i Mark. Na dia mpiasa mahay eto amin'ity sehatry ity aza aho dia mijery mpitondra vitsivitsy ho an'ny fahitana - I Mark dia iray amin'ireo mpitarika izay dinihiko. Na dia veteranin'ny marketing efa ela be aza i Mark, dia nankafiziko ihany koa fa nitsambikina voalohany tamin'ny marketing amin'ny media sosialy izy.
Manana an'i Mark aho Martech Zone Podcast amin'ny tafatafa, nihaona taminy tamina hetsika iray, ary nitombo ny finamanana. Izy dia namana tsara hananana, tsy manam-pahaizana eo amin'ny fomba hitondrany anao handre izay ilainao. Niara-niasa tamin'ny Dell Luminaries podcast izay nahitan'ny mpitarika B2B Influencer Marketing & Content Creation an'i Mark sy Dell, Konstanze Alex, ny fotoana iray hanasongadinana ny talenta mahavariana ananan'i Dell Technologies eo ambanin'ny marika anaovany. Mbola tsy nanao andian-tsarimihetsika podcast toy izao aho ary nanosika ahy hanampy amin'ny fikarohana i Mark ary hamoaka seho mahatalanjona. Tsy afaka mamaly azy mihitsy aho satria nanararaotra ahy!
Noho izany, alaivo an-tsaina ny fahatairako rehefa nahazo fonosana tamin'ny mailaka avy tany amiko aho Vahaolana Marketing Schaefer. Teo ambonin'ilay boaty no nisy varavarankely nisy ny anatiny, a Rebel marketing marika.
Nosokafako ilay boaty ary tao anatiny dia nisy kitina nahaliana iray, izay toa tsy misy ifandraisany, na trinket na clue tsy misy ifandraisany:
Raha mijery akaiky ianao, dia asiana marika miaraka amina pejy isa ireo singa tsirairay:
Savony vita tanana - Pejy 9
Famantarana fisotroana maimaimpoana Westworld - Pejy 199
Fanosotra ny hoditra malefaka - Pejy 232
Elefanta tototry - Pejy 232
Ankehitriny, liana aho ary efa mamaky ny index, ny glossary ary ireo pejy misy marika. Ary rehefa manokatra ilay boky aho dia hitako ity fanamarihana nosoniavina sonia manokana avy tamin'i Marka ity:
Ary koa, misy karatra misy fanamarihana manokana ary sticker momba ny Marketing Rebel ho an'ny solosaina findainy.
Manan-tsaina… Marka nampinono ahy tanteraka!
Fa ny zavatra vitan'i Marka tamin'ny fanaovana an'io dia lesona iray ihany. Nozaraiko taminao ny bokin'i Marka, fa izy kosa no nanetsika ilay fanentanana nanosika ahy hanao.
Fa maninona ity boky ity no misy fitsikerana?
Nisy mpanjifako vaovao nanontany ahy momba ny paikady napetrak'izy ireo. Ny ekipan'ny varotra ataon'izy ireo dia hahafantatra ny vinavinany, hahazo ny adiresy mailaka avy amin'ny antoko fahatelo, ary hanamboatra andiana mailaka fampidirana amin'izy ireo. Nolazain'izy ireo tamiko fa manahy momba ny tahan'ny tsindry ambany-tsindry sy ny fahafaha-manafaka azy ireo amin'ny ankapobeny. Nolazaiko tamin'izy ireo fa tokony ho… izy ireo ary mila mijanona tsy manao spam amin'ireo orinasa ireo. Izy ireo dia nanalavitra ny fahatsinjovana, fa tsy tia azy ireo.
Ao amin'ny fisehoan'i Marka, ity no fitsipika # 1:
Aza manao inona intsony fa mankahala ny mpanjifa.
Manifesto ho an'ny marketing eo afovoan'ny olombelona
Izahay dia miasa amina andiam-panovana stratejika ankehitriny ao anatin'ny orinasa, izay natsangana tamin'ny alàlan'ny fananganana fahatokisana ary hampiasana ny fankasitrahana efa napetrak'izy ireo tamin'ny mpanjifany. Izahay dia mamindra ny orinasa ho olombelona.
Mandalo fotsiny aho Fikomiana ara-barotra, saingy rehefa miresaka aminy aho dia takatro izao ny antony itiavany fatratra ny maha-zava-dehibe an'ity boky ity. Ny fikarohana, ny fomba fijery ary ny fandalinana tranga dia tokony hanetsika ny fototr'ireo lesona saika natosika anao tato anatin'ny folo taona lasa.
Fikomiana tena ilaina izany ary ity lahatsoratra ity dia mampiakatra saina sy manampy amin'ny fitondrana ilay fanovana.
Inona no hampianarin'ny fikomiana marketing anao
Ny fomba fividianan'ny mpanjifa cataclysmic dia vinavinan'ny revolisiona iray nanomboka 100 taona lasa izay.
Maninona ny orinasa no tsy maintsy miorina amin'ny hetsika marketing vokarin'ny mpanjifa fa tsy dokam-barotra nentim-paharazana.
Ny fahamarinana tsy miova dimy an'ny olombelona ao afovoan'ny tetikady marketing mahomby.
Maninona ireo mpanjifa tsy mivadika sy ny fantsom-pivarotana no maty ary inona no tokony hataonao momba azy io izao.
Ahoana ny fomba hanampiana ny mpanjifanao tsara indrindra hanao ny varotra ho anao.
Dingana azo ampiharina mba hanomezana fanitsiana mazava ho azy ho an'ny orinasa amin'ny habe rehetra.
Feno fankasitrahana aho miantso an'i Mark ho namana ary manoro hevitra anao tokoa mba handray ity boky ity avy hatrany. Ho afaka hanana fiatraikany eo noho eo sy eo amin'ny ezaka ara-barotra ianao.
Vakio bebe kokoa momba ny Fikomiana Marketing
Tags: Mark Schaeferfikomiana amin'ny marketing